Kulan ay yeelan lahaayeen xildhibaanadii xilka ka qaaday madaxweyne Guuleed oo ishor-taag lagu sameeyay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Kulan ay yeelan lahaayeen xildhibaanadii xilka ka qaaday madaxweyne Guuleed oo ishor-taag lagu sameeyay
Ciidamo aan la ogeyn cidda ay ka amar qaataan ayaa maanta ishor-taag ku sameeyay kulan ay maanta magaalada Cadaado ku yeelan lahaayeen qaar ka mid ah xildhibaanada Galmudug ee dhawaan xilka ka qaaday madaxweynaha maamulkaas C/kariin Xuseen Guuleed.
Xildhibaanadaasi ayaa maanta qorshahoodu ahaa inay kulan ku yeeshaan xarunta Xero Madoow oo ku taala magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
Kulankaasi ayaa la sheegayaa inay ishor-taag ku sameeyeen ciidamo maleeshiyo ah oo ay xildhibaanadu sheegeen inaysan garaneyn cidda ay ka amar qaataan.
Xero Madoow ayaa ah xero ay xildhibaanada qaarkood kulan ku yeeshaan, waxaana la sheegayaa in ammaanka xildhibaanadaasi haatan loo cabsi qabo.
Dhinaca kale, xildhibaano ka tirsan labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka C/raxmaan Odowaa ayaa haatan magaalada Cadaado u jooga sidii ay xal ugu heli lahaayeen khilaafka siyaasadeed ee weli ka taagan maamulka Galmudug.
Mas’uuliyiintaasi ayaa la sheegayaa inaysan weli ku guuleysan inay xal u helaan xiisadda siyaasadeed oo muddooyinkii ugu dambeysay hareeysay maamulka Galmudug, waxayna xiisadaan siyaasadeed kusoo beegmaysaa xilli gobolada qaar ee dalka ay ka jiraan abaaro baahsan.